ठूलो कार्टेल: कलाकारहरूको लागि इकमर्स Martech Zone
ठूलो कार्टेल: कलाकारहरूको लागि इकमर्स
२०० co मा स्थापना भयो तिनीहरूका सह-संस्थापकले आफ्नो ब्यान्डको माल बेच्न मद्दत गर्न, बिग कार्टेल अहिले विश्वव्यापी 400,000००,००० भन्दा बढी स्वतन्त्र कलाकारहरूको घर छ। उनीहरूको ईकामर्स प्लेटफर्म विशेष रूपमा रचनात्मकको उत्पादन अनलाइन प्राप्त गर्न मद्दतको लागि बनाईएको हो। यहाँ एक ग्राहकबाट उनको भिडियो छ, झुण्ड लाइभ झुण्ड, एक कपडा डिजाइनर।
बिग कार्टेल निम्न लाभ र सुविधाहरू प्रदान गर्दछ:
द्रुत सेटअप - मिनेटमा एक साधारण स्टोर अनलाइन प्राप्त गर्नुहोस्।
प्रयोग गर्न सजिलो - तिनीहरूले प्रयोग गर्न सजिलो एक सरल प्लेटफर्म प्रदान गर्दछ।
व्यापार दिमाग - रिपोर्टिंग र अर्डर व्यवस्थापन।
ब्रान्ड - कुनै कोडिंगको साथ उन्नत अनुकूलन सरल। प्रयोगकर्ताहरूले पूर्व-निर्मित विषयवस्तुहरू चयन गर्न सक्दछन् र छवि, रंग र फन्टहरू सजिलै अनुकूलन गर्न सक्दछन्।
अनुकूलन डोमेन - तपाइँको कुनै पनि डोमेन प्रयोग गर्नुहोस् तपाइँको स्टोरलाई अनुकूलन URL दिन।
उन्नत कोडिंग HTML, CSS, र जाभास्क्रिप्ट सीधा अनुकूलित गर्न वैकल्पिक पहुँच।
अर्डर प्रबन्ध गर्नुहोस्s - एक अर्डर प्रबन्धन क्षेत्र र अर्डर कन्फर्मेसन ईमेलहरू तपाई अनुकूलित गर्न सक्नुहुनेछ।
खोज इञ्जिन अनुकूलित - पसलहरू गुगलका सिफारिसहरूको आधारमा खोज इञ्जिनहरूका लागि अनुकूलित छन्।
तथ्या and्क र एनालिटिक्स - वास्तविक समय ड्यासबोर्ड तथ्या .्क र गुगल एनालिटिक्स एकीकरणको साथ स्टोर गतिविधि र वृद्धि अनुगमन।
छुट कोड - छुट कोडले नयाँ उत्पादनहरू मार्केट गर्ने, तपाईंको स्टोर बढावा दिन, र वफादार ग्राहकहरूलाई पुरस्कृत गर्न विभिन्न तरिकाहरू प्रदान गर्दछ।
डिजिटल उत्पादनहरू - डिजिटल आर्ट, संगीत, भिडियोहरू, फन्टहरू, फोटोहरू, ईपुस्तकहरू, र अन्य डाउनलोड योग्य उत्पादनहरू हाम्रो एकीकृत बहिनी-सेवाको साथ बेच्नुहोस्, चरखी.
फेसबुकमा बेच्नुहोस् - कुनै पनि फेसबुक पृष्ठमा तपाईंको स्टोर जोड्नुहोस् र तपाईंको प्रशंसकहरू तपाईंको उत्पादनहरूमा हाम्रो सहज एकीकृत फेसबुक अनुप्रयोगको माध्यमबाट जोड्नुहोस्।
मोबाइल चेकआउट - तपाइँको सामानहरू तपाइँको आईफोनबाट सिधै बेच्नुहोस् बिग कार्टेल अनुप्रयोग.
टैग: ठूलो कार्टेलडिजिटल डाउनलोड स्टोरइकमर्सकलाकारहरूको लागि ecommerceपुर्खाकला अनलाइन बेच्नुहोस्अनलाइन फेसन बेच्नुहोस्
२०१ For को लागि Online अनलाइन मार्केटिंग रिजोलुसनहरू